Izindaba - Shower Panel VS Hand-held Shower Head
Eqinisweni, kubasebenzi basehhovisi, indlela engcono yokukhathala ngosuku olumatasa ukugeza ngamanzi ashisayo lapho ufika ekhaya. Ngakho-ke uma kukhulunywa ngeukugeza, lapho-ke kufanele sikhulume ngamathuluzi okugeza, ngoba manje izimo zokuphila sezingcono, indlela yokuphila yabantu nayo isishintshile, ngakho-ke amathuluzi okugeza asephendukile. Imvamisa ngisebenzisa kakhulu ekhaya i-ishawa ikhanda, kepha empeleni, ngaphezu kweshawa, kunomkhiqizo osezingeni eliphezulu kakhulu, yi- ishawa iphaneli. Uma kuqhathaniswa neshawa yangokwesiko, ishawaiphaneli unomoya ophezulu. Ukuthi nje akuwona wonke umuntu oyithandayo. Futhi abanye abantu ekuhlobiseni kwendlu yangasese, okokugezaiphaneli nokugeza ikhanda okungcono, uhlale uzizwa ungakwazi ukwehlulela ngokunembile. Ngakho-ke namuhla sizobona ukuthi singakhetha kanjani phakathi kwalokhu okubili!
Isici esikhulu kunazo zonke se- ishawa iphaneli ukuthi ukubukeka kwayo kubukeka kahle ngempela, futhi kunikeza abantu umuzwa wokuba bade. Futhi ekusetshenzisweni kwenqubo kulula kakhulu, futhi kungaba kuhle kakhulu ukugwema ukusaphazeka. Nesinye ishawa esisezingeni eliphezuluiphaneliIbuye ibe nemisebenzi eminingi, njengokushisa okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe, izinga lokushisa elihlale lihlakaniphile, ukubhucungwa, okungahlangabezana kahle nezidingo zabantu abahlukene. Futhi inkinga yobuningi nokusebenza okukhulu komhlaba kuxazululwa ngesikhathi sokufakwa.Kodwa lolu hlobo lweshawaiphaneli ibuye ibize kancane. Isibonelo, ngokwamanani entengo, into ephezulu enjalo kumele ibize kakhulu kunamathuluzi okugeza ajwayelekile. Isakhiwo seshawaiphaneli kuyinkimbinkimbi ukwedlula ukwakheka kweshawa, ngakho-ke uma kukhona ukulimala noma ukwehluleka ngenkathi kusetshenziswa, kunzima ukulungisa.
Eqinisweni, imindeni eminingi isebenzisa ukuphatha ngesandla ikhanda leshawa, ikakhulukazi ngoba intengo yokubanjwa ngesandla ikhanda leshawa kushibhile, futhi uma kuqhathaniswa, ukufakwa nakho kulula kakhulu. Vele kunezinhlobo eziningi zokubanjwa ngesandlaikhanda leshawa, ngakho-ke futhi zilungele i- indlu yangasese ezinobukhulu obuhlukahlukene. Lolu hlobo lweshawa lubuye lusebenzise kakhulu, futhi ingcindezi yamanzi edingekayo incane, ngakho-ke yonga amanzi. Kodwa-ke, futhi inamaphutha ayo, okungukuthi, ingahle ibe nemisebenzi engaphansi, futhi lapho ingcindezi isiphezulu, izoholela kalula ekuchaphazelweni kwamanzi, yenze igumbi limanzi kakhulu.
Ngakho-ke empeleni, uma ungazi ukuthi ungakhetha kanjani phakathi kwalokhu okubili, ungakhetha ngokuya ngosayizi we- indlu yangasese nezidingo zakho. Yize umsebenzi weshawaiphaneli ingaphezulu kakhulu kweshawa esiphethwe ngesandla, akusho ukuthi sidinga yonke imisebenzi yayo. Ikakhulukazi uma kukhona asebekhulile nezingane ekhaya kuphela futhi bengazi okuningi ngokusebenza kwayo, khona-ke le misebenzi empeleni ayisebenzi, futhi akusizi ukuzithenga ekhaya.
Isiphakamiso Sokuthenga Ukukhipha ompompi basekhishini
Iyini i-Wall Mounted Faucet?
I-Hardware esebenzayo ekhishini leKhabhinethi